Condition တွေစစ် မယ် — MYSTERY ZILLION
Condition တွေစစ် မယ်
July 2009 edited August 2009 in C++
ဒီပရိုဂရမ်လေးကတော့number တွေကို Even, Odd နဲ့Zero ကိုရှာခိုင်းတဲ့Simple Program လေးတစ်ခုပါ။ Multi Way Condition ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပြီး.. စက်မှာတော ့မ Run ရသေးပါဘူး..:D (Run ရင် Error တက်မှာစိုးလို ့..ဟီး......):D..ဖရန် ့တို ့ဆိုရင်ရော..ဒီ Program လေးကိုဘယ်လို Logic လေးတွေသုံးပြီးရေးချင်လည်း... ကိုယ်ကြိုက် ့တဲ့Programming Language နဲ ့လည်းရေးလို ့ရတယ်နော်.. ဒီပုစ္ဆာလေးကိုကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်က ဖရန် ့တွေနဲ့Programming ကိုလေ ့လာနေတဲ့ဖရန် ့တွေအားလုံး ရေးပေးကြပါ.....မျောက်ရဲ ့ရည်ရွယ်ချက်က ဖရန် ့တွေအားလုံးရဲ့Logic တွေကိုရှဲလုပ်ချင်လို ့ပါ...
P.S...>>ဒီ Program ကို Professional Programmer တွေမဖြေရ။
ဟီး.:D:D Professional တွေဆိုရင်မျောက် Program ကိုပျင်းမှာစိုးလို ့ပါ:P:P
cout<<"The number is Odd";
cout<<"The number is Even";
ဟီးဟီးကျွန်တော်လည်းရေးကြည့်လိုက်ဦးမယ် တက်လို ့တောဟုတ်ဘူး ငတ်လို ့(အော်ယောင်လို ့)
system.out.print("Enteranumber");
if (num==0) system.out.print(This Number is Zero");
else if ((num%2)==0)system.out.print("This Number is Even");
else system.out.print("This Number is Odd");
program မှာတော့ num ကို Integer လို့ Assign လုပ်ထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် user တွေဆီက num ကိုတောင်းတဲ့အခါမှာတော့ ဘယ်လို number ထည့်ပေးရမယ်ဆိုတာပြောမထားဘဲ လွှတ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ user တွေဆီက num ကိုစတောင်းကတည်းက Integer တစ်လုံးထည့်ပါဆိုတဲ့ပုံစံတောင်းသင့်ပါတယ်။
An even number is an integer that is "evenly divisible" by 2, an odd number is an integer that is not evenly divisible by 2
ပြောဖို့ကျန်သွားလို့ပါ။ အကြောင်းအရာကလည်း နည်းနည်းကွဲလို့ post အသစ်နဲ့ရေးလိုက်ပါတယ်။
even, odd နဲ့ zero ခွဲခိုင်းတဲ့ program လို့ဆိုထားပါတယ်။ ပြောတဲ့အတိုင်းလည်းခွဲပေးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာဖြစ်လို့ zero ကိုသတ်သတ်ခွဲထုတ်လိုက်ရတာပါလဲခင်ဗျာ။ zero ဟာ even number ဖြစ်ပါတယ်။ even နဲ့ odd ခွဲတဲ့ program လို့ဆိုရင်ပိုပြီး general ဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ် ခင်ဗျား။ ဖော်ပြထားတဲ့ program အတိုင်းဆိုရင် zero က even လည်းမဟုတ် odd လည်းမဟုတ်တဲ့ပုံစံပေါက်နေပါတယ်ခင်ဗျား။:)
ဒီProgram ကို Run တဲ ့အခါမှသာစိတ်ကြိုက် number တစ်လုံးကိုရိုက်ထည် ့မှာဖြစ်တဲ ့အတွက ်Program ရေးနေစဉ်အတွင်း ဘယ်လို number မျိုးထည် ့ရမယ်ဆိုတာမပြောပဲလွတ်ထားရတာပါ...။ ဒီသဘောတရားလေးပါ..။:5:
Program ကိုစ Run လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့Screen မှာ "Enter the number:" ဆိုတဲ ့စာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းပဲရှှှိနေမယ်.. အဲဒီမှာ စိတ်ကြိုက် Number တစ်လုံးလုံး(ဥပမာ) ၂၃ ရိုက်ထည် ့တယ်ဆိုပါစို ့..။ စစ်ထားတဲ့Condition အတိုင်းတွက်ချက်ပေးနေတဲ ့့အတွက် အဖြေကတော့Odd ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတယ်...ဒီလိုပဲကြိုက်တဲ့Integer တစ်ခုခုကို ရိုက်ထည် ့တိုင်းမှာလည်း Even, Odd ဆိုပြီးပြနေမှာပါ...ဒီသဘောတရားလေးပါ... :51::51:
ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်လို ့ရှေးဦးစွာပြောချင်ပါတယ်.. ဒီလိုအကြံပြုေ၀ဖန်မှသာမသိတာတွေ သိလာမှာပါ..ဘာလို့Zero ကိုသက်သက်ခွဲထုတ်လိုက်လည်းဆိုရင် Zero ကဘာနဲ ့မှစားလို ့မရလို ့ပါ..။ း)
စိတ်ကြိုက်numberဆိုတော့ 3.426 ထည့်ပေးရင် program ကဘယ်လိုအလုပ် လုပ်တယ်ဆိုတာလေး စဉ်းစားပေးပါလား ကိုhappymonkey ရေ။ program ထဲမှာ num ကို Integer လို့ Assign လုပ်ထားတယ်နော်။ ထည့်လိုက်တဲ့ num က Integer မဟုတ်တော့ ...
3.426 ရိုက်ထည် ့ရင် ပရိုဂရမ်ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့အတူတူပဲလေ bro ရ .အဓိကက Condition စစ်ကတည်းကိုက စားလို ့အကြွင်းက Zero နဲ ့ညီရင် Even မညီရင် Odd ဆိုပြီးစစ်ထားပြီးထား..
အကိုပြောတဲ ့အတိုင်းဆိုရင်တော့Data Type အရ Error တက်တယ်ပေါ ့..Integer ယူထားတာကိုး...ဒါပေမယ့်ဘယ် User မဆို ကိုယ်သုံးထားတဲ့Data Type အပေါ်မူတည်ပြီးတော့သုံးသွားတာချည်းပါပဲ...မျောက်ရဲ့Program ကဒဿမကိန်းကိုမစဉ်းစားတဲ ့အတွက် Integer ဆိုပြီးသုံးသွားတာပါ..:5:
Sorry ပါဗျာ။ ကျွန်တော်က Mr. မှတ်နေလို့ပါ။
program အကြောင်းလေးပြန်ဆက်မယ်နော်။ Integer အတွက်သီးသန့် သုံးမယ့် program ဆိုရင် user ဆီက number တစ်လုံးစတောင်းကတည်းက ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Integer တစ်လုံးထည့်ပါ လို့စတောင်းသင့်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကိုယ့် program က Integer အတွက် OK သွားပြီလေ။ သုံးတဲ့သူက floating number ထည့်သုံးလို့ ဖြစ်လာတဲ့ error က program ရေးသူနဲ့ မဆိုင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ မဟုတ်ရင် ကိုယ့် program က bug မစင်တဲ့ program တစ်ခုဖြစ်သွားမှာပါ။ ဒီအကြောင်းတွေ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာ အမြဲမှန်သလား ဆိုတဲ့ Thread မှာ လည်းဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါတယ်။ program သေးတာ ကြီးတာ ပြသနာမဟုတ်ပါဘူး။ ထောင့်ပေါင်းစုံကတွေးပြီး bug စင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ဖို့က အဓိကလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်က ဘာမှသိပ်မသိပါဘူးဗျာ။ ပြောတာတွေမှားသွားရင် sorry ပါဗျာ။:)
var num1 = parseInt(prompt("Enter integer number:"));
if ( num1%2 ==0)
document.write("Your provided number is even number.");
document.write("Your provided number is odd number.");
ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပြောချင်တာက အခုThread မှာကျွန်တော်ပြောတာတွေဟာ တွေးတဲ့အခါ ထောင့်ပေါင်းစုံကနေကြည့်ပြီး တွေးစေချင်လို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကအသက်လည်းကြီးပြီ။ သဘောတရားတွေလောက်နည်းနည်းသိခဲ့တာပါ။ လူငယ်တွေလုပ်နေတဲ့အလုပ်ထဲ ၀င်ပြီးကန့်လန့်လုပ်နေခြင်း မဟုတ်ပါခင်ဗျား။
ကိုwinlwin ရေးထားတာလေးကြည့်ကြရအောင်ပါ။ ပထမ ရေးတာ အမှန်နည်းနည်းလေး လိုသွားတယ်။ miss print ပါဗျာ။ 3.426 ထည့်ချင်ရင်လည်း program က မမှားပါဘူး။ Odd လို့ပဲ ပြမှာပါ။ လို့miss print ဖြစ်သွားတာ။ Even လို့ပြမှာပါ လို့ရေးရမှာပါ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစရာနည်းနည်းရှိလာပါတယ်။ ကျွန်တော်အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ ဒသမကိန်းတွေကို even လား odd လားလို့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ပါဘူး။ even လား odd လားပြောကြရင် အဲဒီnumber ဟာ integer ဖြစ်ရပါ့မယ်။ ဒါဟာ Integer ရဲ့ Definition အရပြောတာပါ။
နောက်တစ်ခုက တောင်းတုန်းက integer ထည့်ပါတောင်းတယ်။ float ထည့်တော့လည်း program ကတွက်ပေးတာပဲ။ ဒါလည်း bug တစ်မျိုးပါ။ အဲဒီတော့ integer တောင်းတာကို integer မထည့်ရင် GUI ဆိုရင်လည်း window လေးတစ်ခုနဲ့ CLI ဆိုရင်လည်း စာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်း ပေါ်လာအောင် လုပ်လိုက်မယ်ဗျာ။ အဲဒီမှာ ဘာပြောမလဲဆိုရင် ထည့်တဲ့ number က integer မဟုတ်ပါ။ integer number တစ်လုံးထည့်ပါ လို့။ ဒါလိုဆိုရင် အတော်အတန် ပြည့်စုံလာပြီလို့ ယူဆပါတယ်ဗျာ။:)
ဒီလိုအကြံပြုေ၀ဖန်မှသာမသိတာတွေ သိလာမှာပါ..ဘာလို့Zero ကိုသက်သက်ခွဲထုတ်လိုက်လည်းဆိုရင် Zero ကဘာနဲ ့မှစားလို ့မရလို ့ပါ..။ း)
zero ကို zero မဟုတ်တဲ့ ကြိုက်ရာကိန်းနဲ့စားရင် zero ပဲရပါတယ်။ zero ကို ၂ နဲ့စားကြည့်ရအောင်။ ၂ သုံညလီ သုံည၊ ပြတ်ပါတယ်။ ပြတ်တယ်ဆိုတာက အကြွင်း သုံညဆို ပြတ်တယ်လို့ခေါ်တာလေ။ အဲဒါကြောင့် zero က even ထဲမှာပါတာပါ။ စုံကိန်းလို့ပြောရင် အလွယ်တကူ 2, 4, 6, ... လို့ပြောတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်က စုံကိန်းက zero ကစပါတယ်။ 0, 2, 4, 6, ... တွေဟာ စုံကိန်းတွေပါဗျာ။:)
ကိန်းတစ်လုံးကို zero နဲ့တော့ စားလို့မရပါဘူး။ ဘာရတယ်လို့သတ်မှတ်ချက်မရှိလို့ပါ။ စာလိုပြောရင် undefined လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျား။:)
ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေး Output ထုတ်ချင်တယ်ဗျာ
ကျွန်တော်ဖာသာရေးတော့တစောင်းကြီးပဲ output ထွက်နေလို ့ကျွန်တော်ကိုတော့အပျင်းကြီးတယ်ပြောကြမှာပဲ ဟီးဟီးမစဉ်းစားတက်တော့လို ့
3.426 ထည့်ချင်ရင်လည်း program က မမှားပါဘူး။ Odd လို့ပဲ ပြမှာပါ။ လို့miss print ဖြစ်သွားတာ။ Even လို့ပြမှာပါ လို့ရေးရမှာပါ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစရာနည်းနည်းရှိလာပါတယ်။ ကျွန်တော်အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ ဒသမကိန်းတွေကို even လား odd လားလို့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ပါဘူး။ even လား odd လားပြောကြရင် အဲဒီnumber ဟာ integer ဖြစ်ရပါ့မယ်။ ဒါဟာ Integer ရဲ့ Definition အရပြောတာပါ။
User က integer မဟုတ်တဲ့ ဂဏန်းထည့်ရင် ပြန်ထည့်ခိုင်းဖို့ စဉ်းစားသေးတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် (အပျင်းကြီးတယ်ပြောပြော) ဒီ program မျိုးက logic လေး စဉ်းစားတတ်အောင် လေ့ကျင့်တဲ့ program ဆိုပြီး ချန်ထားလိုက်တာပါ။ အစ်ကိုပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင် Even လို့ကော ဘာဖြစ်လို့ ပြရတာလဲဗျ။
ထည့်တဲ့ number က integer မဟုတ်ပါ။ integer number တစ်လုံးထည့်ပါ
လို့ပဲ ပြရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ ထပ်ရေးကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ အခုတော့ အိပ်ပြီ။ :103:
ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါခင်ဗျာ..ဒီ Thread အစမှာရေးထားတဲ့ Program ကမှားနေတယ်နော်......
နောက်ပြီး.....နောက်တစ်ယောက်ပြောသလို့ 3.56 ထည့်ရင် Error ဆိုတာကလည်းမှားနေတယ်ထင်တယ်နော်....int လို့ကြေညာထား
ပေမယ့် float ထည့်ရင်အရှေ့က integer ကိုဘဲဖြစ်ယူလိုက်လိမ့်မယ်....အမှန်ဆိုရင် Odd ဆိုတာဘဲထွက်မှာပါ....ဘာဘဲပြောပြောကိုယ်ရေးတာကိုတော့သေသေချာချာစစ်စေချင်တယ်....ကျွန်တော်ကအားလုံးအတွက်ပြောတာပါ
ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ error ဆိုတာ program error ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ theory error ကိုပြောတာဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အစ်ကိုပြောသလိုပဲ int ကြေငြာထားတဲ့အတွက် logic ကတော့ မှန်နေဦးမှာပါ။ ကိုရဲထက်ပြောတာက တခြားဖြစ်နိုင်တဲ့ bug တွေကို ရှာထားတယ်ထင်ပါတယ်။ တခြားမှားတာတွေ့ရင်လည်း ပြင်ပေးပါဦး။
အစ်ကိုပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင် Even လို့ကော ဘာဖြစ်လို့ ပြရတာလဲဗျ။ :103:
ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက 3.426 ကို ၂ နဲ့စားရင်ပြတ်တယ်ဗျာ။ အဲဒါနဲ့ပဲ Even ပြရမှာလို့ဆိုလိုတာပါဗျာ။
ကျွန်တော်ရေးတာ အပေါ်နဲ့အောက် ရောပြီး မရှင်းမရှင်းဖြစ်သွားတယ်နဲ့တူပါတယ် ကိုwinlwin ရေ။:)
မှားနေတာတွေ့ရင်လဲ ပြင်ပေးလိုက်ပါဗျာ။ odd ဆိုတာလည်းမထွက်ရဘူးဗျ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ 3.56 က odd လည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။
Here it is, python though
>>> print ''.join([chr((x+y)%26+65)+(y%26==25and'\_n'or'')for x in range(26)for y in range(26)])
3.424 ကို ဘယ်လိုစားလိုက်တာလဲဗျ။ လိုက်လို့ မမီတော့ဘူး။ Program အရဆိုရင်တော့ မပြတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်ဒီ သရက်ကို၀င်ဖတ်မိတော့ ပထမဦးဆုံးသတိထားမိတာက ဒီသရက်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ ကို happymonkey ဆိုလိုတာက programming field ထဲက language တွေကိုလေ့လာ နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံး ကိုယ်သန်ရာ language နဲ့ဘယ်လိုဘယ်ပုံရေးမယ်ဆိုတာကို ဖိတ်ခေါ်ထားတာလို့ထင်မိပါတယ်။
ဒုတိယအနေနဲ့က သူက ဒီဟာလေးကိုပဲ logic မှန်မမှန် တခြားဟာတွေနဲ့ဆိုရင်ရော ဘယ်လိုလဲဆိုတာလေးသိချင်တာရယ် သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဉာဏ်ကစားချင်တာလို ထင်မိပါတယ်။
အဲဒီလိုလိုက်ဖတ်ရင်းနဲ့ နောက်ဆုံးသတိထားမိတာက integer and float, even and odd ပြဿနာဖြစ်လာတာသွားတွေ့မိတယ်။
ကိုရဲထက်ရေ စိတ်မဆိုးနဲ့နော်ကျွန်တော်မြင်တာလေးပြောကြည့်မယ် မှားရင် ပြင်ပေးပါဗျာ။ အခု ကိုhappymonkey ရေးထားတဲ့ဟာလေးမှာ num ကို integer အဖြစ်ကြေငြာထားတာ သွားတွေ့မိတဲ့အတွက် ဘယ်လိုကိန်းဂဏန်းတွေပဲထည့်ထည့် ၊ string or char တွေပဲထည့်ထည့် အကုန်လုံးကို integer အဖြစ်ယူသွားမယ်လို့ထင်မိပါတယ်။(ကျွန်တော်လဲ c and c++ ကိုမသုံးတာကြာတော့ မေ့ကုန်ပြီ။ မှန်လားမသိ မှားနေရင်ပြင်ပေးပါဗျာ။ ကျွန်တော်မှတ်မိတာလေး ပြောကြည့်တာပါ။)
နောက်ပြီး zero is even or odd ဆိုပြီး googling လုပ်ကြည့်တာ ဒါလေးတွေသွားတွေ့မိပါတယ်။
နောက်တခ ကိုရဲထက်စဉ်းစားတာ user convenience အတွက်စဉ်းစားတာလို့ထင်ပါတယ် မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တခါတရံမှာ အဲဒီကိစ္စကိုသိပ်ဦးစားပေး စဉ်းစားစရာမလိုဘးလို့ထင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကိုhappymonkey ရေးထားတဲ့ဟာလေးကို ကျွန်တော်တို့ စာမေးပွဲ ဖြေတဲ့ဟာလေးတခုလိုသဘောထားကြည့်ရအောင်ဗျာ။ ဒါဆိုရင် သုံးတဲ့သူ(user)ကို ဘာထည့်ပါညာထည့်ပါပေးထားတာ ပိုအဆင်ပြေနိုင်မလား။ ထည့်တာက မှားနေတယ် လို့msg ပြရင်ရော အဆင်ပြေနိုင်ပါ့မလားဗျာ။ ကျွန်တော်တို့နဲနဲလောက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဗျာ နော့်။
ကျွန်တော့် အမြင်နဲ့အထင်လေးတွေကို ရေးလိုက်ပြောလိုက်မိတာပါ မှားနေရင်ပြင်ပေးပါဗျာ
Calculation မစခင် rounded အရင်ချလိုက်ရင်ရော ကိုရဲထက်ရေ ။ Int ပဲပေးပါလို့ တောင်းထားမယ် အဲဒါကိုမှ ရှေပြီး decimal လာပေးရင်လည်း rounded လုပ်ပလိုက်မယ်။ အဲဒါအဆင်ပြေနိုင်မလား။ အကောင်းဆုံးနီးလမ်းမဟုတ်ပေမယ့် အာပတ်လွတ်ပေါ့ :P
ကိုသားဆိုးနဲ့ ကိုDivinity ပြောထားတာမှန်ပါတယ်။ Integer လို့ ကြေငြာထားကတည်းက ဘာလာလာ(decimal numbers ဆိုရင်တောင်) အရှေ့က whole number ကိုပဲ ယူပြီး program တွက်ပေးသွားမှာပါ။ ကို Divinity ပြောတဲ့ rounded ပေါ့။ C++ မှာတုန်းကလည်း int ကြေငြာထားတယ်။ java မှလည်း int ပဲ သုံးထားတယ် ကျွန်တော်လည်း js script မှာ int လို့ပဲ လက်ခံထားတာပါ။ ကိုရဲထက် ရှင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီ program လေးကို စာမေးပွဲမှာ မေးသလို logic အခြေခံ ရသွားဖို့ပဲ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ ကွန်ပျူတာဆိုတာ ကိုယ်ခိုင်းသလောက်ပဲရတာမို့လို့ လူကပဲ common sense သုံးပြီး တွက်သွားရမှာပါ။
3.246 ဟာ even စုံကိန်း
3.247 ဟာ မကိန်းဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသော်
3.2470 ဟာ စုံကိန်း ဖြစ်ပေလိမ့် မည်။
3.247 = 3.2470 အဲဒီတော့
စုံကိန်း = မကိန်း
မှန်ပါတယ်ကိုwinlwin ။ ကျွန်တော်ကဒီအတိုင်းစားရင်ပြတ်တဲ့ အကြောင်းပြောတာပါဗျာ။ ကျွန်တော်ရေးတာ မရှင်းဖြစ်သွားရင် တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။:)
ကျွန်တော်တစ်ခုပြောပါ့မယ်ဗျာ။ connection သိပ်အဆင်မပြေဘူးလို့ post မခွဲတော့ဘူးဗျာ။ အားလုံးကိုပေါင်းရေးလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရေးမှာက Even လား Odd လား ခွဲပေးမယ့်program ဆိုပါတော့ဗျာ။ ဒီprogramကိုရေးဖို့ ပထမဦးဆုံးသိရမှာက Even ဆိုတာဘာလဲ၊ Odd ဆိုတာဘာလဲပါ။ even တွေ odd တွေဖြစ်ဖို့ ပထမဦးဆုံးဖြစ်ရမှာက Integer ပါ။ Integer ဖြစ်မှ even လား odd လား ပြောလို့ရပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ နောက်တစ်ချက် ကျွန်တော်ပြောဖို့ကျန်နေပါတယ်။ အပေါ်မှာလည်းမေ့နေလို့ မပြောခဲ့ရပါဘူး။ data range ပါ။ integer တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့စစ်မပေးနိုင်ပါဘူး။ 32 bit computer မှာ integer ရဲ့ range က ဘယ်လောက်ရှိတယ် ဘာတွေဘယ်လောက်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသားပါ။ range ကိုကျွန်တော် ခဏမေ့ထားလိုက်ဗျာ။ အဲဒီတော့
ကျွန်တော်တို့ user ဆီက integer တစ်လုံးတောင်းမယ်ဗျာ။ integer မဟုတ်ရင် integer ပေးပါလို့ပြန်တောင်းမယ်ဗျာ။ integer ဟုတ်ရင် စစ်ပေးလိုက်မယ်ဗျာ။
integer ဟုတ်ပါလျက်နဲ့ ကိုယ့်program ကမစစ်ပေးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ။ integer မဟုတ်တာကို စစ်ပေးနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ program အမှန်နည်းနေမှာပါ။
အတန်းစာမေးပွဲအောင်ဖို့ မရည်ရွယ်ပါဘူးဗျာ။ စာမေးပွဲအောင်ဖို့ကတော့ ဆရာသင်တဲ့အတိုင်းချပါဗျာ။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်အပေါ်မှာလည်းပြောထားတာပါ။ ထောင့်ပေါင်းစုံကတွေးတဲ့အကြောင်း ရည်ရွယ်တာပါ။
user သုံးရတာအဆင်ပြေအောင်လည်း လောလောဆယ်မရည်ရွယ်ပါဘူး။ အဲဒါကနောက်တစ်ဆင့် လို့ယူဆပါတယ်ဗျာ။ ပထမဦးဆုံးက ကိုယ့် program ကို bug စင်ဖို့ပဲဦးစွာ ရည်ရွယ်ပါတယ်ဗျာ။
round off ကမလိုရင် မလုပ်သင့်ပါဘူးဗျာ။ အခုဟာက လိုမှမလိုတာဗျာ။ မတတ်သာလို့ approximation လုပ်မယ်ဆိုမှ round off လုပ်သင့်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ကျွန်တော်ရေးသွားတာတွေထဲက မမှန်တာများရှိလျင် ဆက်ပြီး ထောက်ပြေ၀ဖန် ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်ရေးသွားတာတွေကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင် တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ Thread ပိုင်ရှင်ကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်။:)
မှန်ပ ကိုသားဆိုးရယ်..... တော်လိုက်တာ..... မျောက်ရဲ ့သဘောကအဲဒါပဲ.....ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုတော့အများကြီးဗဟုသုတ ရသွားပြီ....ပရိုကရမ်းမီးနဲ ့ပတ်သက်ပြီးတော ့... အာလုံးကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးကြတဲ ့အတွက်....:5::5:
အဲလိုနောက်ရဘူးလေ....:) ဇီးရိုးကကိန်းတွေရှေ ့မှာသာတန်ဘိုးမရှိတာပါ..အနောက်ကိုရောက်သွားရင်တော ့နေရာများလေတန်ဘိုးများလေပဲ...ဟင် ့့ငိုချင်လာပြီနော်..၃.၂၄၇ နဲ့၃.၂၄၇၀ နဲ ့ကတန်ဘိုးချင်းမတူညီတဲ ့အတွက်..equal မဟုတ်ပါ...:p:p:p
ဒါဆို် ပိုက်ဆံ ဒေါ်လာ ၃.၂၄၇ သန်းချေး။ ကျနော် ဒေါ်လာ ၃.၂၄၇၀ သန်း ပြန် ဆပ်မယ်။ ကျနော့်ကို ဒေါ်လာ ၀.၂၂၂၃ သန်း ပြန်အမ်း။
အကိုဂျီး.....ပြန်ပြင်ထားတယ်လေ....ကွန်ကျသွားလို ့နောက်ကျသွားတာ....:P:P:P:P အကိုဂျီးကလက်ဦးသွားတယ်...ဟင် ့:((:((:((:((
ကျနော့်အမြင် integer နေရာမှာ double ဆို အားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်ထင်တယ်။
ကိုဖိုးနစ်ရ... .....ကိုဖိုးနစ်ပြောတာလည်းမှန်ပါတယ်..ဒါဗေမယ် ့ဒီလိုရိုးရိုးပရိုဂရမ်တစ်ဗုဒ် မှာ...မလိုအပ်ပဲနေရာအများကြီးမယူချင်လို့Integer ကိုသုံးတာပါ..:5:
အဓိကက Logic တွေကိုဖလှယ်ချင်တာပါ......ဒီလိုရေးတဲ ့နေရာမှာဘယ်လိုပြောင်းပြီးရေးရင်ရမယ်ဆိိုတာကိုရှဲချင်တာပါ:71::P:P:P
ဒီ program မှာ .. အဓိက က တော့ error handling ထည့်ပေးသင့်ပါတယ် ... user တွေအနေနဲ့ က စာသားတွေ ရိုက်နိုင်သလို ဒဿမ ကိန်းတွေလဲပါနိုင်ပါတယ်. အဲတော့ try catch လိုမျိုး error handling မျိုးနဲ့ handle လုပ်သင့်တယ်ထင်ပါတယ်.. တကယ်လို့ သာ int နဲ့ declare လုပ်ထားတာကို double ထည့်မိရင်တော့ number precision error လိုမျိုးတက်နိုင်ပြီး String စာသား ရိုက်ထည့်မိရင်တော့ runtime error မျိုးတက်နိုင်ပါတယ်... အဲတော့ ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ user input ကို exception handling လုပ်ပြီး exception မှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ message ကိုပြန်ပေးသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ် ... logic ကိုဆွေးနွေးတယ်ဆိုလို့ ကျွန်တော်လဲ ၀င်ဆွေးနွေး ကြည့်တာပါ.. ကျွန်တော်ကတစ်ခါတစ်လေမှ ဒီဖိုရမ်ကို ရောက်တဲ့သူပါ... thanks.